सावधान ! यो नम्बरबाट कल आउँदा रिसिभ नगर्न टेलिकमको आग्रह - Everest Dainik - News from Nepal
सावधान ! यो नम्बरबाट कल आउँदा रिसिभ नगर्न टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं, मंसिर १० । नेपाल टेलिकमले अपरिचित नम्बरबाट आएको फोन नउठाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । टेलिकमले अपरिचित, कलरआइडी नभएका, ०१२३४५६ र १२३४५६ जस्ता नम्बबाट आएको कल नउठाउन अनुरोध गरेको छ ।
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले यस्ता नम्बरबाट आएको कलबाट ठगीने क्रम बढ्नै गएको भन्दै नागरिकको हितको लागि जानकारी गराइएको बताइन् ।
विभिन्न आपराधिक गिरोहले फोनमा चिठ्ठा परेको भन्दै कल गर्ने र बैकमा पैसा पठाउन लगाउने अनि ठग्ने गरेको टेलिकमले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस स्मार्ट टेलिकमले पनि भव्यरुपमा मनायो संविधान दिवस
यो नम्बर बाट कल गरेर चिठ्ठा परेको जानकारी गराउने र उल्टै ठग्ने क्रम बढेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोधमानै ग्राहकलाई एसएमएस बाट जानकारी गराउन थालिएको छ ।
प्रवक्ता बैद्यले यस्ता कल कुन रुटबाट आएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भईरहेको बताइन् ।